Masuuliyiin Heer Deegaan ah oo Soo kor-meeray Mashaariicaha Waawayn. - Cakaara News
Masuuliyiin Heer Deegaan ah oo Soo kor-meeray Mashaariicaha Waawayn.
Qabridahar (CN) Isiin 25ka, January, 2016 Gudiga dabagalka iyo qiimaynta mashaariicaha waawayne ee SDG iyo mashaariicaha horumarineed ee kale oo ah, masuuliyiin heer deegaan oo ay hogaaminaysay gudoomiyaha gudigan dabagalka iyo qiimaynta mashaariicaha ahna wasiirka horumarinta khayraadka biyaha DDSI marwo Fartuun Cabdi Mahdi ayaa kor-meer shaqo ku soo maray mashaariicaha horumarineed ee ka socday Gobolada Jarar iyo Qoraxay.
Ujeedada socdaalka masuuliyiinta heer deegaan ayaa ahayd in ay dabagal iyo qiimayn ku sameeyeen heerka mashaariicaha waawayn kuwa bilowga ah kuwa meel dhexe maraya iyo kuwa dhamaadka ah ay fulitoodu marayso.
Waxaana ka mid ahaa mashaariicaha waawayn ee ay booqdeen masuuliyiintani mashruuca Baka, Goomaar, Maraacaato, iyo Wejiwaaji kuwaasi oo ah mashaariicihii uu dhawaan soo dhagax dhigay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ee ahaa biyo xidheenada waawayn ee looga faa’iidaynayo bulshada gaar ahaan dhinaca wax soo saarka beeraha.
Masuuliyiintan ayaa waxaa kale oo ay soo kor-meereen garoonka diyaaradaha ee qabridahar oo dhismihiis hadda meel-gabo gabo ah marayo kaasi oo ay hirgalinta dhimihiisa gacanta ku hayso wakaalada Iibka iyo adeega gaarka ah ee DDSI.
Masuuliyiintan ayaa shir qiimayn ah ku yeeshay magaalada qabridahar shirkaasi oo diirada lagu saarayay heer ka ay marayaan mashaariicana ay fulinayaan wakaaladaha DDSI waxaana ka soo qaybgaleen masuuliyiina wakaaladaha iyo injineeradii gacanta ku haya fulinaya mashaariicahan. Waxaana laysla qaatan in ay hadda bilow fiican marayaan mashaariicana biyo xidheenadi iyo in la sii dar dargaliyo si mudo kooban loogu soo gabagabeeyo.